Ahazoana Lesona Lehibe Amin’ny Fanatsarana ny Kalitaom-Baovao Ny Fitsongoana Dia ny Fitsabahana An-tseraseran’i Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Avrily 2018 10:01 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Italiano, Español, čeština , English
Sarintava maro avy amin'ny tambajotran'ny kaonty Twitter pro-Kremlin. Sary avy amin'i Lawrence Alexander.
Noho ny fiampangan'ny F.B.I. ireo Rosiana miisa 13 tamin'ny fitsabahana fifidianana filoham-pirenena Amerikana 2016, nirobohan'ny Global Voices (GV) indray ny fikarohana lalina nataony momba ny fitsabahana antserasera ataon'ny Rosiana, izay manoritra ny maha-zavadehibe ny lahatahiry sy ny fikarohana open-source ahafahana mahatakarana ny fiantraikany.
Natomboky ny RuNet Echo, fisantaran'andraikitry ny Global Voices, efa tamin'ny taona 2011 ny fanangom-baovao momba ireo raboto Rosiana manira-tena, ireo mpandoto rindrina ary ireo bilaogera karamaina mikendry ny hampiròna ny vaovao antserasera, ny fifanakalozan-kevitra ary ny fanentanana politika. Ny tanjona voalohan'ny RuNet Echo dia ny “hanalehibe sy handalina ny fahatakarana ny aterineto Rosiana (RuNet) sy ireo vondrom-piarahamonina mifandrohy aminy.”
Tamin'ny alalan'ny fikarohan'i Lawrence Alexander, ny GV no voalohany nampiseho, tamin'ny fampiasana fitaovana open source toy ny NodeXL sy Gephi, fa misy ao amin'ny Twitter io raboto manokana mifandray amin'ny Rosiana mpandoto rindrina io izay tantanin'ny Sampam-pikarohana aterineto (I.R.A.) ary miasa amin'ny fomba mirindra, mankany sy avy any amin'ny toerana iray manokana, ary mifandray amin'ny kaonty manokana mba hanakorontana sy hamilivily ny resaka antserasera.
Izany tsikaritra izany no nametraka ny tahiry sy ny fitaovam-pikarohana ho hitam-bahoaka ary nanoka-dalana ho an'ireo mpikaroka hafa mba hanjohy ny tantara lavidavitra kokoa.
Niverina nitsidika ny fikarohana nataon'i Alexander sy ny fiantraikany eo amin'ny fahatakaran'ny Departemantam-panjakan'i Etazonia amin'ny fiasan'ny Rosiana ny tantaran’ny Washinton Post nivoaka tamin'ny Desambra 2017:
Nanao fehin-teny ireo manampahefanan'i Etazonia diso fanantenana fa tsy avy amin'ny sampam-pitsikilovana Amerikana fa avy amin'ny mpikaroka tsy miankina [tahaka an'i Alexander] ny torohay tsara indrindra momba ny fanentanan'i Rosia amin'ny media sosialy ao Okraina.
Nitsidika an'i Alexander tao Brighton, Fanjakana Mitambatra mihitsy aza i Macon Phillips, manampahefana ara-nomerika ao amin'ny Departemantam-panjakana tamin'ny volana Jiona 2015 hahazoany fanazavana feno mikasika ny fomba fiasan'i Alexander.
Notontosaina taona maro talohan'ny nidiran'ny tantara tao amin'ny pejy voalohany amin'ny New York Times sy ny fampahalalam-baovao mahazatra hafa ny fitantaran'ny Global Voices. Nitarika fikarohana lalindalina kokoa avy amin'ireo mpitati-baovao sy mpanadihady ny fitantarana nataonay, ary azo lazaina ho nanampy tamin'ny famelabelarana ny zavatra nataon'ny Rosiana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana 2016. Manantena izahay fa nahazo tombontsoa tamin'ity fitaovana ity ihany koa ny ao Silicon Valley hanohizany ny fanadihadiana manokana momba ny fomba fikirakiran'ny I.R.A ny sehatr'izy ireo.
Fitsongoan-dia ny fitsabahan'ny Rosiana ao amin'ny aterineto hatrany am-piandohana
Tamin'ny taona 2011, nifantohan'ny GV ny fanafihana DDoS nihatra tamin'ny LiveJournal. Manamarika ny tantara tahaka ny “Russia: Distributed Denial of LiveJournal,” avy amin'i Alexey Sidorenko fa efa nanomboka tamin'ny taona 2007 ny fanafihana DDoS mihatra amin'ireo miresaka politika.
Nanjary antom-pikarohana ao amin'ny GV amin'izao fotoana izao io lohahevitra io, mivelatra avy amin'ny fanafihana DDoS ka hatramin'ny famotorona momba ny adim-panaporitsahana lahatahiry nataon'i Kremlin, ireo fanafihana habaka malaza amin'ny fifanakalozan-kevitra ary ireo trangan-kaonty Twitter hosoka tamin'ny Janoary 2012.
Manamarika i Sidorenko:
Efa nipoitra fotoana ela talohan'ireo kaonty hosoka hafa malaza ireo Rosiana mpisera Twitter hosoka voalohany… ka nanangana fomba fanesoeso manokana ary tafiditra tsara ao anatin'ny tontolo sosialy sy politika ao amin'ny seha-bilaogy Rosiana.
Raha valim-panafihan'ireo mpanoratra mahaleotena ireo kaonty hosoka ireo, asehony ny habetsaka sy ny fiantraikan'ireo mari-panondroana sandoka eo amin'ny sehatra antserasera Rosiana.
Tamin'ny volana Febroary 2012, natrehin'ny GV maso ny fomba fanomezan-karama ireo bilaogera malaza mba hanefena ny hevi-bahoaka Rosiana. Nanohy nitsongo dia sy nanoratra momba ny onjam-panafihana DDoS, ny fihanaky ny tontolon'ny kaonty Twitter hosoka, ny fanentanana fampielezam-baovao diso voarindra, ary ny fipoiran'ny tambajotran-draboto mamily ny torohaim-bahoaka eo amin'ny sehatra sosialy.
Nitsongoin'ny GV dia ireo fanafihana satria niova lasibatra izy ireo, tamin'ny voalohany ireo Rosiana mpanohitra sy mpikatroka, avy eo ny Okrainiana taorian'ny fanafihana tamin'ny taona 2014, ary avy eo ireo gazety, ireo olo-malaza, politisiana sy ireo rafitra Amerikana sy Tandrefana mbola tamin'ny taona 2014 ihany koa.
Tamin'ny taona 2014, nitatitra momba ireo fanafihana tsy tapaka ny Twitter-n'ireo mpanao politika Amerikana ireo tonian-dahatsoratra ao amin'ny RuNet Echo Kevin Rothrock sy Andrey Tselikov, manangona ny vaovaon'ireo fikambanan'ny mpanaporitsaka dosie tahaka an'i Shaltay Boltay (Anonymous International). Nandritra izany fotoana izany ihany, nitsongo dia ny ezaka ataon'i Rosia hametra ny fidirana ao amin'ny Twitter sy ireo tambajotra media sosialy hafa izahay ary ny ezaka famoahana lalàna hifehezana ny bilaogera.
Tantara Buzzfeed iray avy amin'ilay mpanao gazety Max Seddon nivoaka tamin'ny novambra 2014, miresaka ny fomba nanafihan'ny tafika rosiana mpandoto rindrina an'i Amerika izao naka ho loharanom-baovao an'i Alexey Sidorenko ato amin'ny Global Voices.
Tamin'ny Novambra 2014, Aric Toler mpandray anjara ato amin'ny GV no voalohany nitatitra tamin'ny teny anglisy ny fisiana, ny mari-panondroana ary ny toerana hita maso ny tranoben'ny I.R.A. tao amin'ny lah-55 Lalana Savushkina ao St. Petersburg izay lasa toeram-pifantohan'ny fiampangan'ny FBI tamin'ny taona 2018. Efa navoakan'ny fampitam-baovao rosiana toy ny Novaya Gazeta tamin'ny septambra 2013 sy ny Delovoi Petersburg tamin'ny novambra 2014 ny antsipirian-toeran'ny orinasa rosiana mpandoto rindrina an-tserasera.
Tamin'ny Avrily 2015 i Alexander no namoaka ny fanadihadiana voalohany momba ny tambajotra sosialy ka naneho manontolo ny halehiben'ny fanentanana raboto amin'ny Twitter ataon'i Kremlin. Ao anatin’ireo tantara ireo, izay nampanaovin'i Tetyana Lokot, mpandray anjara ato amin'ny Global Voices tany ampiandohana, nangonin'i Alexander ny porofon'ny tambajotran'ny fahafahakeliny kaonty Twitter miisa 20.500, mandrindra ny asan-dry zareo ao anatin'ny ezaka hampiely vaovao nodisoina. Noporofoiny tamin'ny alalan'ny fanazavana fa ireo kaonty ireo amin'ny ankapobeny dia rafetin'ny raboto, ary mifandrohy amin'ny sampan-draharaha sy toerana voatondro manokana. Notaterina betsaka tamin'ireo seha-baovao amin'ny teny rosiana toy ny Tjournal ireo zavatra tsikaritr'i Alexander ireo.
Lesona azo avy amin'ny fitsongoan-dia sy fitateram-[baovao] open-source
Noho io asa io dia efa manana ny fitaovana, fomba fiasa ary singan-dahatahiry hamantarana ny misy ireo kaonty Twitter sy izay tompony ny mpanangom-baovao sy ny mpanao fanadihadiana. Midika ny fanadihadian-dahatahiry open-source an'i Alexander fa mora tsongoin-dia ato amin'ny aterineto ireo kaonty ireo. Ny haitaom-pamadihan-dalan'ny kaody Google Analytics nataony koa no nanampy tamin'ny famantarana ireo tranonkalam-baovao faikany natao hameno ny milina mpanangom-baovao ao Rosia ho an'ireo Rosiana mpanara-baovao.
Nampiseho ireo teknikam-pikarohana ireo fa mividy dokambarotra ao amin'ny Google ny Rosiana hitarihana sy handisoam-baovao niainga tamin'ny ady tao Okraina Atsinanana ka hatramin'ny politikan'i Etazonia sy Eoropeana.
Nisy mpitati-baovao sy mpikaroka hafa nanangan'asa tamin'ity asa ity, nijery akaiky ny fandotoan-drindrina an-tserasera ataon'ny Rosiana. Tamin'ny jona 2015 i Adrian Chen no nanoratra ny tantarany voalohany tao amin'ny gazety ao Etazonia be mpanaraka, tao amin'ny gazetiboky mivoaka isan'alahady an'ny New York Times. Tsy nampiditra ny teknika open-source na fanadihadiana lahatahiry ny asany fa fanadihadiana nataon'ny tenany tao amin'ny tranoben'ny I.R.A. mihitsy.
Roa taona taty aoriana, ity asa ity no nanome lasitra hanaovana famotopotorana lalina kokoa amin'ny zavatra ataon'ny Rosiana. Mbola manohy amin'ny fanangonam-baovao sy tantara ampolony mifandraika aminy ny GV.
Raha voatohana tsara kokoa sy nohadihadian'ny mpanangom-baovao sy ireo mpanao famotorana ara-pitsarana aloha kokoa ity fikarohana ity, mety nitondra ho amin'ny fampihenana ny fahasaimban-javatra, na farafaharatsiny niteraka fahamailoana bebe kokoa amin'ny ezaka ataon'ny Rosiana amin'ny fanapahana tarangana eo amin'ny sehatra goavana ny fombafomba demaokratika ny porofo nentiny.